5. HTML ကို လေ့လာခြင်း | IT4MF
5. HTML ကို လေ့လာခြင်း
HTML ရဲ့ အခြေခံ Element တွေ ဖြစ်တဲ့
တွေကို နားလည်သဘောပေါက်သွားပြီဆိုတော့ အခုဆက်လက်ပြီး HTML နဲ့ပတ်သက်တဲ့ Knowledge များကို ဆက်လက်လေ့လာရာ ဖြစ်ပါတယ်။ HTML နှင့် Web Page တစ်ခုကို ရေးသားရာတွင် <title> </title> ဟာ အလွန်အရေးကြီးတဲ့ command တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
အဓိကကတော့ Search Engine တွေဖြစ်ကြသည့် Google , Yahoo , Bing တို့မှ သင့် Website ကို index ပြုလုပ်ရန်အတွက် ဒီ <title></title> နှစ်ခုအတွင်းမှာ ရေးသားဖော်ပြသည့် စကားလုံးပေါ် မူတည်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့် သင်ဟာ <title> </title> အတွင်း Lesson 5: What have you learned so far? ဆိုတာကို ရေးသားထားတယ်ဆိုပါစို့။
ဒါဆိုရင် Search Engine မှ ၎င်း စကားလုံးပါဝင်သော Search များကို ရည်ညွှန်းရာမှာ သင့် Website ကို ဖော်ပြမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အလွယ်ဆုံး မှတ်သားထားရမှာကတော့ <title> </title> ကြားမှာရေးတဲ့ စကားလုံးဟာ Search Engine နှင့် Link လုပ်ရန် ဖြစ်ပါတယ်။ အောက်ဖော်ပြပါပုံတွင် ကြည့်ပါ
အခု Body Section ကို ထပ်မံ တိုးချဲ့ပြီး လေ့လာကြည့်ပါမယ်။ Body Section နှင့်ပတ်သက်ပြီး အရေးအကြီးဆုံး Element များဖြစ်သည့် အောက်ပါ Element များကိုတော့ အလွတ်ရနေရန် လိုအပ်ပါတယ်။
ဒီ HTML Document မှာ အသစ်ပါဝင်လာတာဆိုလို့ <h1> </h1> နှင့် <h2> </h2> နှစ်မျိုးတည်းသာ သင့်အတွက် အသစ်ပါဝင်လာပါတယ်။ ဒီ <h1> <h2> တို့ဆိုတာဟာ တကယ်တော့ Heading Font Size ကို ရည်ညွှန်းတာဖြစ်ပါတယ်။ Heading တွေကို ပြောရရင်တော့ <h1> မှ <h6> အထိ ရှိပါတယ်။ <h1> ကတော့ အကြီးဆုံး ဖြစ်ပြီး <h6> ကတော့ အသေးဆုံး ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီတော့ သင်ရေးသားတဲ့ HTML Document တစ်ခုအတွင်းမှာ ခေါင်းစဉ်များရေးထိုးရာမှာ <h1> ဒါမှ မဟုတ် <h2> ကို အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ Sub Title ဆိုလျှင်တော့ အခြားသော <h3> <h4> စသည်ဖြင့် နှစ်သက်သလို အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ <p> ကတော့အရင် ဖော်ပြထားတဲ့ သင်ခန်းစာမှာ ရှင်းပြပြီးသွားပါပြီ။ ဒီသင်ခန်းစာရဲ့ Main Point ကတော့ HTML Element တွေနဲ့ ပိုမိုယဉ်ပါးလာအောင်နှင့် Heading Tag တွေကို သဘောပေါက်ရန် ဖြစ်ပါတယ်။